Neymar Anofara Haadi Wheelchair Mushure me Tsaona
Posted on July 10, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Neymar akashushikana paakataura nezve iyo kuipa izvo zvakamutongera kubuda muNdebe yeNyika. Akataura kana ibvi kumusana kwake raingova kudivi iye "anogona kunge ari mu wiricheya" pari zvino.
Mutambi weBrazil akachema paakayeuka iyo kuipa nemusi weChina. Aifanira kumira kutaura kwemasekondi akati wandei, achidonhedza musoro wake nekuisa ruoko pamberi pemaziso ake.
Neymar anoti, "Zvakaoma kutaura nezvedanho rakazoguma raitika zvakadaro chakakosha nguva yebasa rangu. "Anoti" Mwari vakamuropafadza ", zvichitadzisa chakakomba kuipa.
Neymar ane makore makumi maviri nemaviri akanyunyuta nezve dambudziko kubva kuna Juan Camilo Zuniga, asi akati mutambi weColombia akashevedzera achikumbira ruregerero.
[btn link = "http://abcnews.go.com/Sports/wireStory/neymar-thankful-wiricheya-now-24513715 "target =" _ blank "] Verenga Original AP Chinyorwa [/ btn]
Zoo muBrazil inovaka wiricheya yehunhu yakaremara
Mawiricheya-anowanikwa zviratidzo kuti uwane facelift muNew York